backtrack - MYSTERY ZILLION
December 2014 in Linux/Unix
Can backtrack be installed on acer aspire 4738 laptop?
When i install it,first i type "startx" and afteralittle while,it show blackscreen and doesn't continue installation.
Backtrack အနေနဲ့တော့ Hardware Support အားနည်းသေးတယ် ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ Kali ကိုပဲ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ် ။ Kali ကတော့ Backtrack5နောက်ထွက်လာတဲ့ Backtrack6လို့ပြောလို့ရတဲ့ Distro ဖြစ်ပြီး Backtrack Team ကပဲ Support လုပ်ပါတယ် ။ သူ့မှာ Hardware Support တွေ ပိုကောင်းလာပါတယ် ။ http://www.kali-linux.org/ ကနေ Download လုပ်လို့ရပါတယ်